WIC Benefit Recipes Miraha iyo Khudaarta CAT 19 | JPMA, Inc.
Miraha iyo veggies
Si fiican u cun cun = dareem fiican
Waxyaabaha dhadhanka ah ee la isku qurxiyo ee leh WIC dalag iyo fikrado ku dheehan fikrado
Mango Salsa Waffle Tostada
Ango fudud iyo digirta digirta madow ee dabiiciga ah ayaa ka sameysan rooti boodboodo oo loogu talagalay waffles toasted.
Apple Spiced Spineje ah
Cusub! Ku dhaji Baastada suugada leh 'Zucchini Sauce'
Hal cunto oo saxan iyadoo la isticmaalayo zucchini caafimaad leh si loo abuuro Maraqa qancinaya
Dr Yum Mashruuca Friteeni Frittatas
Sida omelet aad loo dubay, frittatas waa cunno khudradeed oo caafimaad leh oo loo adeegsan karo quraac ama casho. Waxay sidoo kale yihiin hab fiican oo loo isticmaalo khudaarta dheeraadka ah.
Cuntooyinka la jarjaray
Cagaarka Cagaarka ee la dubay
Dufan iyo dhirbaaxo leh Dareemis farsameysan ayaa soo jiidaya maraqa jilicsan ee xagaaga ee loo yaqaan 'appetizer appisizer'!
Peach iyo cream Waffle Topper
Yogurt-ka Greek-ka ah iyo kareemka miro guduudku waxay ka buuxaan waffles-ka macaan, qorfe.
Cunto la dubay
Miro-sida muuska oo kale ah ayaa hodan ku ah fitamiinada iyo macdanaha qaarkood kuwaas oo gacan ka geysta caafimaadka wanaagsan. Qorshayaasha waxaa laga heli karaa dukaamada cuntada ugu weyn waxayna ku dari karaan dhadhan cusub iyo cuntooyin cusub qorshahaaga caafimaad-cunidda.
Veggie cusub iyo Bariis walaaq shiil
Cunno-Saaxiibtinimo leh iyo Kid-ansaxisay Sharax Shiinaha
Qalabka xayawaanka ah
Tufaax macmacaan ah oo cusub oo leh qorfe
Naqshad sawir ah ee Parmesan eggplant. Caleenta dufan ee siriyalka iyo farmaajada Parmesan ee ku jirta duubista ukunta ka hor intaan la siinin qajir diiran marinara.
Miraha iyo Cereal Smoothie
Miraha, badarka iyo caanaha oo dhan oo isku dhafan hal smoothie delicioushie.
Baradhada Kalluunka ee Xeebaha
Quraac degdeg ah oo lagu sameeyo ukunta iyo dunta maqaarka. Samee jilicsan oo sareysa leh jalapeno.
Biyo kulul leh Tufaax
Kaliya 5 daqiiqado waa wax kasta oo ay qaadato si aad naftaada uga soo qaadato subaxda qabow, baraf baraf ah ilaa tropics!
Isku-diyaarso xilliga qaboobaha cusub oo leh macmacaan shaashad-dhakhso ah oo fudud. Ama, isbedelka xawaaraha, u adeegso quraacda.
Tufaaxa Beriiska ee Apple Berry
Tufaaxa macaan ee dabiiciga ah iyo qorfe waxa uu dhammeystiraa blueberries cusub ee kor ku xusan ee waffles cufan.
Dr Yum Mashruuca Cananaaska Awoodda Salad
Kani waa mid ka mid ah cuntooyinka aan ugu jecel nahay manhajkeenna barbaarinta.
Saladh Doodwanaag ah
Salad digaag leh iyo salad dufan leh salad iyo tamaandho oo ku jirta sarreen dhan
Saddexda maaddadood waxay sameeyaan daawooyinka la qaboojiyay ee la qaboojiyey
Cusub! Maraqa Bean iyo Veggie
Dadkan iyo maraqda qabow ee qabow waxay ku habboon yihiin maalin qabow waxayna ka buuxaan khudaar caafimaad leh
Strawberry Salsa iyo Chips Corned Chips
Dhalinta Khudaarta Cagaaran ee Cuntada
Dr Yum Mashruuca Cajiib Mango salsa
Kani waa cuntada ugu caansan ee barnaamijkeenna barbaarinta oo carruurta ku baraya mangos, miro aan caadi ahayn.
Dufanka iyo Saladhka Dufanka ah ee Waffles
Noockan dib u cusbooneysiinta saladhka digaaggu wuxuu u egyahay Bariga sifo udgoon ee suugo soy ah iyo curry.
Dr Yum Project Broccoli oo leh Lemon iyo Parmesan
Dubista broccoli waxay soo saartaa dhadhan la yaab leh oo aan kaftan ahayn! Cuntadani waxay soo bandhigaysaa hab lagu kariyo veggie-kan caadiga ah kaas oo hubaal ah inuu qoyska oo dhan u rogayo kuwa jecel broccoli!
Rootiga macaan ee macaan
Isku day kuwan kuwan cirridka ah, dabacsan, dubeysey baradho baraf ah. Suugo shimbir yar oo saafi ah oo jilicsan ayaa dhameeya cuntada fudud
Quraacda Quraacda ee baradhada macaan
Cinnamon Raisin Macmacaan Tufaaxa
Maqaarka, maqaar-macaan-macaan-macaan ayaa buuxiya hindisada, tufaax casiir leh. Dooro tufaax oo si wanaagsan u dubi kara, sida Cortland, Granny Smith, McIntosh, Jonathan, Rome Beauty, Boqortooyada, Fuji ama Gala.
Nadiif Fog ah oo Fudud
Nooca la-qaado ayaa fududeeyey. Kaliya galaan dukaankaaga iyo cashadaada waa la sameeyaa!
Chowder Corn ka dibna leh Parmesan Croutons
Maraqa Beerta Xagaaga ee Dr Yum
Waxaan rabnay inaan abuurno cunto karinta taasoo muujin doonta khudaarta xagaaga, laakiin aan dareemin culeys ama aad u buuxinaya cimilada diiran. Hubi inaad wax ku filan sameyso dhowr maalmood sababtoo ah way ka dhadhan fiican tahay maalinta xigta! Cuntadani sidoo kale ma leh mid ka mid ah siddeedda ugu sarreeya ee xasaasiyadda cuntada ee ugu caansan, taasoo ka dhigaysa doorasho weyn qoysaska leh xasaasiyadda cuntada.
Cagaarka digirta cagaaran iyo baradhada
Cusub! Ingiriis Muffin Sandwich Sandwich
Kufiican quraac dhakhso ah oo buuxinaysa
Cusub! Tufaaxa la dubay
Taariikhi dayrta oo ku habboon galab qabow
Cusub! Wraps Apple
Beer caano ah Smoothie
Cuntada, koonfur-galbeed ee ugu weyn ee suxuunta ah ama saxan dhinaca
Tex-Mex Gaariga Bean
Sidee baad u khaldami kartaa jiiska, yaanyada, iyo digirta (iyo waxyaabo kale oo badan!) La dubay ilaa inta si buuxda u dhalaalay? U adeegso bariiska ama sida qashinka lagu nuugo.
Digirta cagaaran ee la dubay
Kalluun gogol digaag cusub oo lakabyo subagga la shiiday ka dib, ka dibna ku dhex darso badarka bariiska loogu talagalay cunto fudud oo la ansixiyey.
Salad Cagaaran Tropical
Fiican Creamy la'aanta dembiga
Dr. Yum Mashruuca Sloppy Joe Sliders
Sagaal jirkeyga wali gabi ahaanba laguma iibin basbaaska, basasha iyo boqoshaada, laakiin waxaan arkaa hadaan sifiican ugu googooyo makiinada wax soosaarka, ma dhibayaan inta badan.
Khudaar iyo Cranberry Crisp
Salad Salad ah
Cusub - Shaciir Jambalaya
Noocan casriga ah ee Cajun waxaa ku raran khudaar
Barley Beer Lidil
Cunto qoob-ka-ciyaarka Turkiga
Cuntada hilibka ee la isku qurxiyo, tufaaxa macaan ee shiidan iyo lowska la jarjaray ayaa lagu xiraa tortillas dhan sarreen ah ee ku taala cuntadan.
Maraq Qudaar cagaaran oo cusub
Maraq qaboojiyaha-qabow oo saaxiibtinimo-jecel ayaa ka go'ay cagaar
P, B iyo J Dip
Faraha Digaagga Jamaican leh Suugo Dheecaan ah
Mangoes waxay sameeyaan dareen quruxsan oo leh dareenka digaaga, laakiin haddii aysan joogin xilliga xiga, isticmaal canjeelo cusub ama qasacadaysan.
Xoogaa Faransiiska Toast Sandwiches
Dr Yum Mashruucyada Lentils oo leh isbinaajka ka badan Bariiska
Si dhakhso ah oo sahlan loo isticmaalo
Isticmaal siriyalka dufanka bariiska si aad u abuurto rooti faransiis ah oo sahlan oo lagu daray maanga cusub iyo strawberry
Baked Qajaar Beerka
Dr Yum Mashruuca Cauliflower ee Dr Yum
Ma ogtahay in celceliska Mareykanku cuno 117 rodol oo baradho ah sanad walba? In kasta oo baradhada ay yihiin khudrad aad u fiican, haddana badanaa waa la shiilaa oo waxaa loo diyaariyaa habab aan caafimaad qabin. La kulan Tubta Cauliflower!
Dufan Doogga Kala Dabeeta
Pumpkin maahan kaliya mahadnaq! Ku raaxee sanadka-hareerahaan si sahlan oo macaan leh.
Protein-ku duuban qulqulo ama loo isticmaalo sida faafidda
Shukulaatada madoow ee shukulaatada madow
Waxay u egtahay oo dhadhamisaa sida shukulaatada qaniga ah, oo dhir udgoon, laakiin waxay ku bilaabataa avocado bisil iyo moos.
Baastada Aasiyaanka leh Suugada looska
Cunto fudud oo dhadhamiya kuleyl ama qabow weyn oo laga dhigi karo basbaas ama fudeyd
Banana Raisin Smoothie Bowl
Smoothie ku jirta baaquli? Maxay tahay sababta? Qaado bakeeriyada bran iyo ku dar cadcad dufan leh, muuska, caanaha aan dufanka lahayn, subagga looska, malab iyo sabiib
Strawberry Shukulaatada madow Maqaar-barar
Berry Blast Qarashka Cuntada
Shukulaatada shimbiraha loo yaqaan "Peanut Peanut"
Bakte Broccoli Tots
Cuntooyinka caanaha ee caanaha ah ayaa lagu ridayaa wanaaggiisa broccoli
Ku samee arimahan Axadda si aad u kululaatid hadhaaga quraacda ah ee fudud ee usbuuca oo dhan.
Hilib Cake Cannaan oo la kariyey
Ma heli karno miro yar oo ku filan? Kadibna baaqan quraacda ayaa kuu ah. Wuxuu isku daraa dhadhanka caadiga ah ee baaquliga firileyda iyo caanaha.
Qaniinyada Zucchini Pizza
Cusub! Miraha Cusub oo Malab Diiran oo Yogurt La Dhigayo
Si dhakhso leh oo cusub, kani waa hubaal inuu ku farxi doono quraac ama cunto fudud
Cusub! Bariis bunni ah iyo salad salad ah
Cunto caafimaad leh, oo la awoodi karo oo si fudud loo samayn karo
Cusub! Muus Balayash oo Bac ku jira
Muuska cusub, granola iyo yogurt waxaa lagu daraa hab xiiso leh si loo abuuro cunto fudud / macmacaan
Lantil Taco Filling
Berry Isku Taabanay Faransiiska Toast
Caanaha dufanka casiirka ah
Cunnooyinka Khaaska ah ee Ilmaha loo Ansixiyo xilli-xilliyeedka
Dr Yum Project Avocado, Bean, iyo Corn (ABC) Dhex Dheer
e ayaa loogu magac daray cuntada sida "ABC Dip" (loogu talagalay avokado, digir iyo galley!) Waxaa loogu adeegi karaa jajabka loo yaqaan 'tortilla chips' ama sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa khudradda khudradda oo leh dhinaca bariiska iyo khudaarta.
Avocado iyo Egg Waffle Topper
Isku day inaad qaadatid kala duwan oo ah avokado toasty. Noocani waxa uu ku dhajiyaa waffle waffle leh guacamole fudud iyo ukunta la shiilay.
Marka beertaada ay la kariso zucchini, samee sovory, shiilan shiilan. Cheddar farmaajo iyo basasha cagaaran waxay ku daraan dhadhan wadan iyaga ah.
Noocaan foornada leh ee loo yaqaan 'chunga' ayaa waxaa ku jira dufan yar, laakiin dhadhanka iyo dhadhanka oo dhan ee dabiiciga ah.
Shukulaatada caanaha loo yaqaan "Peanut"
Fries Baradho ah oo macaan
Cripsy bakediisa baradhada baradhada macaan
Dr Yum Project Cucumber Qaraha Qaraha Salsa
Tani waxay keeneysaa laba raashin oo xagaaga ah, qajaar iyo qaraha, si wada jir ah dhadhan cusub oo cusub!
Egg iyo Cheese Tacos
Waxaa sameeyay JPMA, Inc. | Xuquuqda daabacaadda 2012 - 2021 | Dhammaan xuquuqaha way xifdiyeen